Ny Semalt no manambara ny fahasamihafana eo amin'ny SEO sy SMM
Ny ankamaroan'ny orinasa dia maniry hiroborobo amin'ny varotra an-tserasera. Na izany aza, mba hahombiazanyonline marketing, mila teknika elektronika sasany tahaka ny SEO sy ny SMM. Ireo teknika roa ireo dia mety mitovitovy amin'ny mpandraharaha irayizay tsy miresaka amin'ny sehatry ny varotra dizitaly - todo para polarizar. Ohatra, ny SEO dia mety hitady fikarohana lalindalina kokoa amin'ny media sosialyNy dokam-barotra dia misy dokam-barotra. Ireo taktika roa ireo dia mety hahasoa ny ankamaroan'ny orinasa an-tserasera indrindra raha mahafantatra ny fahasamihafana.
Jason Adler, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success of Semalt Digital Services, dia manolotra hevitra manan-danja izay afaka manavaka ny SEO amin'ny SMM:
Ireo dia tetika amin'ny fampiroboroboana amin'ny Internet izay mikendry ny hampitombo ny fahitana nyny tranokalanao ao anaty motera fikarohana, indrindra rehefa misy fanalahidy iray amin'ny fikarohana. SEO dia mampiombon-kevitra maro eo amin'ny toerana sy ivelan'ny toerana hitondrana azyfifamoivoizana amin'ny milina fikarohana. Ho an'ny mpivarotra marika nomerika. Ny tanjon'ny fanentanana SEO mahomby dia ny hahazoana toerana mahasoa ao amin'ny laharanany valin'ny fikarohana momba ny fikarohana voafaritra. Zava-dehibe izany satria azonao atao ny mandresy ny mpifaninana aminao, ka mahazo vaovao momba ny kalitao vaovaoAry ny tena zava-dehibe dia ampitombo ny fifanakalozan-kevitra. SEO dia mitaky ny fampiasana paikady toy ny:
Search Engine Marketing (SEM) dia fomba fanao hafa amin'ny marketing amin'ny aterineto.Ny SEM no lisitra voaray. Ny fametrahana dokam-barotra mibaribary eo amin'ny pejin'ny valim-pikarohan'ireo mpampiasa manokana..Ny dingana arahina diampanolo-tsaina. Ny olona sasany amin'ny demografika sasantsasany dia hahita ny dokam-barotrao mandritra ny fotoana voafaritra. Io fomba fanao io dia ampiasaina betsaka noho ny tsy misy azypaikady.
Marketing Social Media (SMM).
Na dia manangona ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny karoka fitadiavam-pitadiavana aza ny SEO, dia mbola digitale ny SMMtetik'asa ara-barotra. Ny SMM dia mampiasa ny media sosialy ho toy ny fepetra hahazoana mpanjifa an-tserasera. Ny haino aman-jery sosialy dia mikendry tombontsoa ara-sosialytranonkala tambajotra toy ny Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest ary LinkedIn. Ny mpividy eo amin'io sehatra io dia mampitombo ny fanentanana marika, manangonamailaka, mahazo rohy ary manatsara ny tombony azo avy amin'ny fampiasana ireo fomba maro azo jerena ao amin'ny media sosialy. Ohatra, manana Facebook ny Facebookpaikady momba ny karama adihevitra. Ireo dokam-barotra ireo dia hifantoka amin'ny loharanom-baovao iray manokana izay napetrakao taminao. Fivarotana hafa amin'ny aterinetoNy fantsom-pifandraisana amin'ny media sosialy dia ahitana:
Videos toa YouTube na Vimeo
Mizara sary tahaka ny amin'ny Instagram sy Pinterest.
Nandritra ny fomban-drazana, ny SEO sy SMM dia tanjona nahazo ny mpanjifa ho an'ny tranonkala iray. Na dia eo azaNy fahasamihafana, mampitombo ihany koa ny fanentanana ny marika amin'ny mpanjifa mety. Amin'ny lafiny iray, ny fiovan'ny mpitsidika iray amin'nyNy mpanjifa dia tsy miankina tanteraka amin'izy ireo. Misy antony hafa toy ny fanorenana tranonkala.
Mila orinasa dizitaly ny orinasa maniry hahombiazana, Na izany aza,Ireo teny toy ny Search Engine Optimization (SEO) sy ny Social Media Marketing (SMM) dia mety ho misavoritaka. SEO sy SMM ireo dia marketing ara-dizitalyteknika. Amin'ny ankapobeny, tanjon'izy ireo amin'ny fampiroboroboana ny marika marika ary ny tena zava-dehibe indrindra, ny fahazoana mpanjifa vaovao amin'ny aterineto. Na izany aza, izy ireo diasamy hafa amin'ny fomba fiasan'izy ireo. Ohatra, ny SEO dia midika ho fampitomboana ny fahitana any anaty motera lehibe raha midika hoe fitomboan'ny SMMfanentanana marika mampiasa ny media sosialy. Amin'ny alalan'ny fahatakarana ny fahasamihafana misy azy ireo dia ilaina ny tetika ary mety hitondra soa maharitraHo an'ny orinasa iray rehefa vita tsara.